California Streamin '| NAB Ratidza Nhau | 2020 NAB Ratidza Midhiya Partner uye Mugadziri weNAB Ratidza PENYU. Broadcast Inhau Nhau
musha » Content Creation » California Streamin '
Fungidzira nzvimbo inoyevedza ine zuva uye inonakidza gore-gore, uko mimhanzi yepamoyo inowanzoitwa pamhenderekedzo dzakanaka pedyo nehusiku husiku, mabara uye nekirabhu inozivikanwa yenyika yekuseka. Kunyange izvi zvichizonzwika sekurota kure kune vakawanda, kuna Brian Sheil zviroto zvinoitika.
Kurota kwake kwekushanda mumhanzi uye makirabhu emimhanzi akatungamira Sheil kune rimwe guta diki reHermosa Beach, CA, imwe yeakawanda akanaka Los Angeles-area maguta emahombekombe uko kusikwa kwevanhu masimba uye matarenda anomhanyisa. Zviri muchiitiko ichi kuti akatanga kambani yake, Varaidzo Services LA Inc., iyo yakapararira nyika yese, iine mahofisi muNew Jersey neLas Vegas. Nhasi, seakabudirira Certified NewTek TriCaster anoshanda uye muridzi weazhinji TriCaster masisitimu, Sheil anozvitora sevatengi vake "" Dream Catcher "sezvo iye achishandisa TriCaster yake kuraramisa-matarenda avo kubva muguta uye dunhu raanoda.
"Sezvo TriCaster iri yevhidhiyo-yakakura vhidhiyo yekugadzira magetsi mukomputa, nharembozha, ini ndinokwanisa kumisikidza nekukurumidza mumuchina mudiki mukati mekirabhu kana nzvimbo, uye ndishandise kuburitsa yakakwirira-yepamusoro, multicamera vhidhiyo inoratidza kuti famba uchienda kunzvimbo dzakawanda panguva imwe chete, zvese pasina kukanganisa vafambi, vanoita, kana kufarira, ”akadaro Sheil. "Senge 'mutengi kurota mubati', mufaro wangu kuti izvozvi zviitise zvimwe zvevaroti veCalifornia varoto kuzadzikiswa-kutepfenyura zviitiko zvavo zvevatori venhau nezviitiko kuti vaonekwe, vazivikanwe, uye vadzikiswe nehunyanzvi hwavo-uye TriCaster iri kubatsira ndiite izvozvo. "
Mumwe wevakarota kudaro weCalifornia ndiAlan Sanford, muridzi wekirabhu uye mushambadzi wemitambo anosimudzira uyo ave nenguva yakareba achirota nekuita nyeredzi-yakakura mimhanzi mumhanzi waizokwevera zviuru zvevaoni. Achibvumidza kurota uku sekwake, Sheil akabatsira Sanford nekugadzira vhidhiyo yemakorokoto ake madiki akawanda nezviitiko zvaakaramba achivaka zvine simba rakawandisa rekuisa chiono chake chakakura. Kwemakore iwayo, Sheil akaunza imwe yeake akawanda TriCaster masisitimu, akafadza Sanford nezvakangoitwa nehunyanzvi uhu.
Ne "BeachLife Music festival" yapfuura, chiitiko chezuva re3 chine ma headliners-akadai saWillie Nelson, Vakomana veBlue Boys 'Brian Wilson, Jason Mraz, Ziggy Marley, uye Blues Vafambi — chiroto cheSanford chakaitika. Zviitiko izvi zvakabatwa zvichirira kubva pamatanho maviri akapatsanurwa paRedondo Beach, ruzhinji rwemhenderekedzo yegungwa kuchamhembe kweHorosa Beach.
"BeachLife yakagadzirwa senge chirongwa chekuda ini kuti ndiunze mutambo wepamusoro-soro kumunharaunda wandakakurira mairi, zvakare kugadzira muenzaniso wemuenzaniso wekutepfenyura wandinotenda mazviri, uko mutambo unogona kutora 20 kusvika 50 nguva vateereri-kunze kwevaya vanopinda muchiitiko ichi-nekuburitsa pachena senhepfenyuro, "Sanford akadaro.
"Seyekutanga kwemhemberero zhinji dzinouya, zvinonyanya kukosha kuti uwedzere mutsika nemagariro emhemberero pamutambo kutanga kuitira kuti uwane musika wekugovana uye uzive," Sanford yakawedzera. "Kutepfenyurwa chaiko kwaive pakati pechirongwa chekusimudzira uye tinotenda chakabudirira mukubudirira kwakasarudzika 'BeachLife'."
Munguva yemutambo, Sheil akamisikidza TriCaster inodzora nzvimbo inoshandisa diki yakatsika tsoka mutende yaive pasi pejende rakakura iro Screenworks-iro rarama zviitiko zvekugadzira masevhisi ruoko ruoko rwe mobile video rori hombe NEP, Inc.-yaive kugadzira mutsara wechirongwa- kudimburwa kwechiitiko cherukova rwacho.
Achishanda seDirector uye Mutariri Wemukati, Sheil akatora izvi zvirongwa zvinopa chikafu muPrivCaster, uye nekuwedzera akawedzera-pasi-chetatu uye akazara skrini yemaziso, mutsigiri wemvumo, uye zvimwe zvinhu zvakajekesa sezvaaifambisa show yakapera. Dzimwe nguva, aive achifambisa yakazara-rez, yakakwira bitrate HD Vhidhiyo kune vakawanda kunge vashanu vakaparadzana, pamusoro-pamusoro-iyo (OTT) kuenda, kubatanidza neLondonLife Music Festival YouTube chiteshi, Sanford's "Kurarama Rizere" kuratidzira peji rekarenda pane yemagariro midhiya, uye nevatambi vacho vega Facebook mapeji.
Sezvineiwo, ichiridzwa mafirimu kubva kuBeachLife matanho makuru maviri - inozivikanwa se'kureba dhirefu 'uye' yakaderera tide ', Sheil akatarisa ese mavhidhiyo ehupenyu uye odhiyo mafashama anoyerera kuburikidza neFalCaster. Akakwanisawo nhepfenyuro ichitamba kubva paiyo switcher yemukati, DDR, makadhi emagineti, makadhi ekumiririra, uye CG apo vaitamba zvisirizvo maawa e13 pazuva kwemazuva matatu.
Sechikamu cheiyi basa rakawandisa, akaisawo uye nekuisanganisa dzakasiyana-siyana zvikamu zve kamera-makamera-akadai senge recaps, ruzhinji shoti, uye chakatsigirwa zviripo-muchirongwa ichi uye runyararo rwizi. Vhidhiyo yehurongwa yakatumirwa kubva kuVestCaster seanosi-kunze kuenda kuma jumbo skrini kune imwe yematanho maviri pakati pezviito zvekuvaraidza vanhu uku vashandi vachimisikidzwa kune vanotevera vanoita. Mavhidhiyo ekutora, ayo aive nemifananidzo yepamusoro yezvakaitika zuva rega rega, yakagadzirwa neBokaLife festival timu.
"Kubata kwaBrian kweTestCaster, uye kuzvipira kwake kugara parizvino netekinoroji munzvimbo ino inochinja nguva dzose, chinhu chakanaka kuva nechikwata," akadaro Sanford. "Nokubatanidza mashoma emagetsi vhidhiyo pane compact, yepakati duratifomu, TriCaster inopa mwero wekureruka uyo wandinotenda unopa mukurumbira, isina-dambudziko show." Sanford yatove kubasa kugadzira mutambo wakakura, zvirinani mimhanzi uye kurira kwehupenyu 2020.
Sheil anotorawo kudada nekuva mubatiri webhuku raMike Lacey, muridzi weThe Comedy neMagic Club, kirabhu inozivikanwa yemitambo muHolosa Beach uko Jay Leno nenzira yechitendero akaita chiitiko chake chekumuka Svondo yega yega kubvira 1978. Makore mashoma kumashure, Sheil akange abatsira Lacey kugadzira / kuvaka imba yemakamuri-kusanganisira kuvhenekera uye odhiyo-kuitira kuti iyo TriCaster ikwanise kusimuka uye kuenderera “pakadonha ngowani,” Sheil akadaro. "Kubva ipapo, takaita nzizi dzakawanda ikoko kumakambani akasiyana siyana evaraidzo, pakati pevamwe."
Mubasa rake, Sheil anowanzo svika maawa mashoma isati yatanga kuratidza chero gadziriso yekumisikidza kamera yake pamwe neFalCaster yekurarama yakawanda-kamera switching. Nekudyidzana kwayo kwakabatana, TriCaster inogonesa Sheil kutonga zvese zvikamu zvehupenyu hwekushambadzira kugadzirwa, kazhinji sekutungamira kwemurume-mumwe vhidhiyo.
Ndichiri kushanda paBeachLife Music Festival, basa raSheil rakaitawo mukana wakakura kuseri kwemaziratidziro ane Screenworks vashandi, vasina kugona kubatsira asi kufadzwa nezvaingaitwa naiye iye neCastCaster yake, kunyanya achienzaniswa nekwavo 40, simbi inorema. muvhenganisi wezviono. Pakati pemazuva maviri evhidhiyo pre-kugadzirwa kugadzira-kumusoro uye kudzidzira kumutambo wemimhanzi, chimwe chiitiko, International Surfers Mubairo Show, zvaiitika pamhenderekedzo padyo nenzvimbo yavo.
Sezvo Screenworks yaive yoshandirwa kuti ishandise zviitiko zvese izvi, chirongwa chavo chaive chekutora chinja chavo chikuru nekuchigadzirisazve padyo nemabhairo ekushandisa. Asi Sheil akavayambira kuti kutama uku kunogona kukonzera kuti vashande husiku hwese kuti vatore chinja chavo uye chinogadziriswazve munguva yeBeachLife.
Nekufananidza, Sheil akataura kuti TriCaster yake ichave yekufungidzira kufamba uye kugadzirisa, uye haina kutora nguva yakareba Screenworks isati yakanyanya kufadzwa neiyo TriCaster yekufambisa, ergonomics, uye yakakwira basa zvekuti ikozvino vari kufunga kuitenga kuti ishandiswe gore rinouya. BeachLife uye Surfer Mubairo. Sheil, uyo achazobatsira zviitiko zvese izvi, akataura kuti gore rinouya, NDI networking ichashandiswawo IP-based on -saiti chiratidzo nzira. (Ari kufarawo kuti kushandira shamwari yake Alan Sanford kwakamuisa mukana wekuona Screenworks semutengi mutsva anoita basa raanoda.)
Referrals uye neshoko remuromo kubva kune vatengi vanofara rakavhura mikova yakawanda yemukana kuna Sheil. Kuteerera kune zvese zvinodiwa nemutengi, zvishuvo uye zviroto, Sheil akati, "Kuve munzvimbo chaiyo panguva chaiyo, iwe unoziva, apo rombo rinosangana nekugadzirira, rakandibatsira kukura bhizinesi rangu nebasa kubva kumisangano mikuru yenhepfenyuro, seMiddle Central, MTV , VH1, CBS, Viacom, uye yakarova NBC Universal inoratidzwa seThe Voice neAmerican's Got Talent. ”Sheil zvakare anogara akabatikana nezvezviwanikwa zvekushambadzira gigs, semagungano egore reComic Con neVid Con, pamwe neSuzuki kambani yepasi rose vhidhiyo yekuita mharidzo, uye yeAdobe kutengeserana mavhidhiyo.
"Ini ndinonyatso kukwereta TriCaster, uye ruzivo rwangu rwetekinoroji iyi, yekugadzira kambani yangu, Zviroto zveSource Services LA zvinoitika, uye zviroto zveshamwari dzangu zvinoitika," Sheil akadaro. "Kuve neTroCaster muhomwe yangu yekumusana makore ese aya yakandiisa munzvimbo dzandaigona kubatsira vandinoshanda navo, shamwari, uye shamwari nekurarama-nekutepfenyura midhiya yavo mikuru nemitambo yevaraidzo, zvichiita kuti zviroto zvedu zvese kuCalifornia zviitike."
CINEDIGM Inoita Kutsigira Mhuri nekupa Iwo Akakurumbira Dhijitari Networks Dzemahara Kwemazuva makumi matanhatu - March 18, 2020
Vizrt Boka revaridzi IP-Yakatemerwa Adaptive uye Software-Rakatsanangurwa Visual Inotaurwa Nhau Kuti Tsigire Vatengi uye Vabatsiri - March 7, 2020
Kuchengetedza: A yakakosha Ally Iyo Inopa Simba Broadcasters uye Vagadziri Vemukati - February 17, 2020
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Graham Chapman Prmoted toEditor OTT SJGolden - Spears & Misoro Video Engineer	2019-12-03
Previous: Blackmagic Dhiza Makamera uye Switcher Powers South Africa Kudonhedza Daisies
Zvadaro: Yakazara Sail Yunivhesiti Inoshanda neTVU Networks Kupa Simba Inotevera Generation ye Sportscasters